Ny zotram-piaramanidina saika hanan-karena amin'ny volan'ny sidina efa ho tapitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny zotram-piaramanidina saika hanan-karena amin'ny volan'ny sidina efa ho tapitra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Raha nanafoana na nanova sidina ianao tao anatin'ny roa taona lasa, dia alao antoka fa hitaky ny sandan'ny tapakila alohan'ny hampiasana anao.
Ny zotram-piaramanidina dia mipetraka amin'ny $ 10 Miliarion ny sandan'ny tapakila tsy ampiasaina ary ankehitriny dia lany ny fotoana ho azy ireo.
Rehefa nanapaka ny drafitry ny dia ataon'ny tsirairay ny COVID-19. nanitatra ny politikan'ny fanafoanana sy ny famerenanana ny seranam-piaramanidina.
Mpandeha maro izay nanova na nanafoana ny sidina no manana kaontim-pitaterana navoakan'ny seranam-piaramanidina izay mety ho tapitra haingana.
Na dia nisedra mafy aza ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tamin'ny taona 2020, maro no hahazo vola be amin'ny volan'ny sidina lany daty. Araka ny tatitra, ny mpitatitra fiaramanidina dia mipetraka amin'ny $ 10 Miliara ny sandan'ny tapakila tsy ampiasaina ary ankehitriny dia lany ny fotoana.
Rehefa nanapaka ny drafitry ny dia nataon'ny COVID-19 ny olona, ​​dia nanitatra ny politikan'ny fanafoanana sy ny famerenanana ny seranam-piaramanidina. Betsaka ny olona niova na sidina nofoanana manana kaontim-pitaterana navoakan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka izay mety ho tapitra haingana. Ity ny fomba hijerena sy hampiasana ny volanao alohan'ny dia tara loatra.
Tadiavo ireo mailaka taloha
Raha nanafoana ny sidina ianao dia azo inoana fa efa nandefa mailaka fanamafisana ianao miaraka amin'ny antsipiriany momba ny trosan'ny dia anao. Fomba iray tsara haneriterena ny fikarohana dia ny fanoratana ny anaran'ny zotram-piaramanidina ao amin'ny bara fitadiavana boaty ary hikorisa ao. Ireo mailaka dia matetika hampiditra ny "crédit de voyage" na "famandrihana" ao amin'ilay andalana.
Mamorona profil miaraka amin'ny Airline
Raha vantany vao hitanao ny mailakao dia tokony hisy torolàlana momba ny fomba hidiranao ao amin'ny tranonkalan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary hamboarina indray miaraka amin'ny trosan'ny dianao. Avy any dia ho azonao atao koa ny manamarina ny habetsaky ny trosanao ary rehefa ho tapitra ny fotoana.
Antsoy ny ekipan'ny Serivisy ho an'ny mpanjifa Airline
Ity safidy ity dia mety mitaky adiny iray na roa amin'ny telefaona. Raha tsy azonao antoka ny fampiasana na tsia ny fampiasana izany dia mety ho tsara kokoa ny miresaka amin'ny solontenan'ny serivisy ho an'ny seranam-piaramanidina. Miaraka amin'ny anaranao sy ny nomeraonanao fanamafisana tany am-boalohany, dia ho azonao atao ny mampiasa ny trosa navelanao.
Raha vantany vao tapitra ny trosan'ny dia ataonao dia tsy misy azo averina. Raha nanafoana na nanova sidina ianao tao anatin'ny roa taona lasa, dia alao antoka fa hitaky ny sandan'ny tapakila alohan'ny hampiasana anao.
Hatreto aloha, United Airlines no fiaramanidina amerikana lehibe nanitatra ny sandan'ny tapakila tsy niasa hatramin'ny 31 des 2022.